सँधै खुसी रहन चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस यस्ता पाँच उपाय - Internet Khabar
सँधै खुसी रहन चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस यस्ता पाँच उपाय
February 16, 2018 July 26, 2018 Internet Khabar Desk
काठमााडौं । बदलिँदो समयसँगै मानिस अरुका व्यवहारबाट आजित हुने होइन की आफुलाई पनि समयसँगै बदल्नु पर्दछ । आफ्नो मनलाई शान्त राख्नुपर्छ ।
अरुसँग रिसाउनु वा ठुस्किनुको साटो आफुलाई सकारात्मक कार्यमा व्यस्त राख्नु उत्तम हुन्छ । रचनात्मक कार्यले मनलाई खुसी र सन्तुष्ट पार्दछ । मानिसले आफुलाई खुसी राख्न केही नियम वा व्यवहारको पालना गर्नुपर्दछ । ती मध्ये केही यस्ता छन् :
१. समयको पावन्दीः यदि तपाइँलाई केही काम गर्न दिइएको छ वा कसैसँग भेट गर्नका लागि कुनै समय निर्धारण गर्नुभएको छ भने यो कुरामा ध्यान दिनुहोस् । समयसीमा भित्र काम गरिभ्याउनु नै समयको व्यवस्थापन हो । चाहे तपाइँ कामकाजी हुनुहोस् वा गृहिणी सबैले आफ्नो निर्धारित कामका लागि निश्चित समय छुट्टाउनुहोस् । यदि तपाइँले समय तालिका बनाएर निर्धारित समयमा निर्धरित काम गर्नुभयो भने तपाइँले जिवनमा सफलता तथा खुसी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ।
२. आफैलाई उपहार दिनुहोसः तपाइाको जिवनशैली चाहे जतिसुकै व्यस्त किन नहोस् केही समय आफ्नो लागि अवश्य निकाल्नुहोस् । यसरी निकालेको समय यस्तो हुनुपर्छ की त्यसमा तपाइँमाथि कुनै दबाब हुनु हुँदैन । त्यस समय तपाइँले आफ्नो रुचीको कुनै काम गर्नुहोस् । मनपर्ने गीत सुन्न सक्नुहुन्छ, किताब पढ्न सक्नुहुन्छ वा सृंगार ।
३. सकारात्मक सोचः भनिन्छ जसले जस्तो सोँच्दछ ऊ उस्तै हुन्छ । त्यसैले आफ्नो मनमा सदैव सकारात्मक सोँचाइ बनाउनुहोस् । नकारात्मक सोँचाइ लिनबाट बँच्नुहोस् । थोरै बिरामी हुँदा समेत मनोबल उच्च पार्नुहोस् र सोँच्नुहोस् की म स्वस्थ छु र सदैव स्वस्थ रहनेछु । तपाइँसँग नभएको चिज सम्झेर वा कल्पना गरेर मन दुखाउनु भन्दा आफुसँग भएको चिजसँग खुसी हुन सिक्नुहोस् ।
४. पौष्टिक आहारः पोषण विशेषज्ञहका अनुसार सरीरलाई फिट राख्नका लागि सन्तुलित आहार हुनु आवश्यक हुन्छ । हरेक दिन बिहान नास्ता गर्नुहोस् । खानामा सागपात, गेडागुडी, सलाद आदि अनिवार्य रुपमा समावेश गर्नुहोस् ।
५. पर्याप्त निद्राः विशेषज्ञहरुका अनुसार रातमा तपाइँ जति गहिरो निद्रा सुत्नुहुन्छ अर्को बिहान उति नै आफुलाई ताजा महसुस गर्नुहुन्छ । त्यसैले रातमा पर्याप्त निद्रा लिनुहोस् । ८ घण्टाको निद्रा वयस्क व्यक्तिलाई आवश्यक हुन्छ । रातमा सुत्ने र बिहान उठ्ने समय अनियमित नबनाउनुहोस् ।
Follow @internet_khabar Internet Khabar Desk
February 16, 2018 July 26, 2018
जानीराख्नुहोस घरको कुन दिशामा कुन इस्टदेव उपयुक्त
कुन बार जन्मेका मानिसको स्वभाव कस्तो हुन्छ ? थाहा पाउनुहोस
October 24, 2017 December 29, 2018
यस्ता संकेत देखिए भने सम्झनुहोस् केही राम्रो हुँदैछ
June 18, 2016 July 29, 2018
स्ट्रबेरी खानुस् क्यान्सरसँग लड्नुस्…
पिपलको बोट उखेन्दा पनि लाग्छ पितृ र शनि दोष, हुनसक्छ दुर्भाग्य !
आँखाको रङबाट थाहा हुन्छ मान्छेको व्यक्तित्व, मन पराएको मान्छे चिन्ने सजिलो उपाय